IS BARBARDHIG : QOWMIYADAHA UGU CUNSURISAN SOOMAALIDA!
C/Rahman A,Kaneec(C/Rahman Eelay)
Dadka Soomaalidu yastaa waxay degan yihiin dhamaan geyiga Soomaaliyeed meel kasta oo ka mid ah. Beel walba oo ka mid ah beelaha Ajiga ahna si gaar ah ayey ula dhaqmantaa qowmiyadahaa ay yasto ee ag degan ama ku hoos nool. Waxaa loo kala qaadi karaa qowmiyadaha wax dulmiya sidan:
1. Deegaanada Waqooyi:
Waa qowmiyadaha ugu takoorka xun sida xuna ula dhaqma bulshada ay u baxsadeen Midgaan. Guur takoorka waxa ay kala siman yihiin Soomaalida inteeda kale, laakiin waxay dheeryihiin xaqirid, aflagaado, duleysi iyo xoriyad darro. Xoriyad darradu waa qofka oo loo diido inuu sheegto meesha uu ka soo jeedo. Midgaanku wuxuu ku hoos lamaan yahay qabiilooyinka ay la degaan, iyageyna sheegtaan. Ajiga dega deegaanadan waxay aaminsan yihiin in ay iska leeyihiin hadba midgaha sheegta oo ay u adeegaan, geelana u raacaan lana dagaal galaan. Weelka uu nin Midgaan ahi wax ku cuno waa la tuuraa oo cid kale waxba laguma siiyo, haddii uu reerka ag degan yahayna wuxuu iska leeyahay majarafad yar ama gorof isaga u gooni ah. Ma leh degaan gooni ah oo ay Midguhu degaan ee qabiilka uu ku lamaansan yahay ayuu weligii ag degaa kuna abtirsadaa! Quudhsiga iyo cayda ugu xumi waa Midgaan, gabayadoodana aad bay uga buuxdaa!
2. Gobolada dhexe & Bari:
Way ka roon yihiin Reer Waqooyiga xaga takoorka inkastooy xaga Guur takoorka isaga mid yihiin. Laakiin, waxay ku dhaamaan in aysan adoonsan ee ay qowmiyada la yasaa ay Hanti yeelan karaan, aan aad loo caayin, aad loo xaqirin, leeyihiin deegaano gooni ah oo ka tirsan magaalooyinka, wax la wada cuno, haybtoodana ay sheegtaan oo aysan cidna isku lamaanin. Waxaa lagu tilmaamaa in ay yihiin Madhibaan dadkuna u yaqaaniin, laguna sharfaa. Ma ogola magaca Midgaan waayo waxay aaminsan yihiin in loola jeedo caay iyo yasmo.
3. Gobolada Koonfureed:
a) Deegaanada Digil & Mirif
Dadka la yaso ee ku nool deegaanadan waxay u badan yihiin dadka Jareerta ah. Inkasta oo ay jiraan dadyow kale, hadana guud ahaan waxay dadku u kala qaybsan yihiin Jareer iyo Jileec. Jareerta Mirifluhu waa dadka aadka loogu dhibo deegaanada Koonfurta Soomaaliya. Waxay aad ugu dhow yihiin dhibaatada deegaanada Wagooyi looga gaysto dadka Midgaha ah waxbana kuma kala duwana, waayo waxaan jirin xeer ay wada dejisteen labadan qowmiyadood oo ka dhexeeya. Jareerta inta badan dibada u soo qaxday dagaaladii sokeeyana waa Jareertii ku dhexnoolaan weydey deegaanadaas.
b) Deegaanada kale ee Koonfurta Soomaaliya
Waxaa xusid mudan sida ay qowmiyada Biyo Maalku ula dhaqmeen dadka Jareerta ah ee la dega. Taariikhda dadkani waxay ka soo bilaabataa ganacsigii dadka waxaana laga keenay Tanzania iyo ka fogba. Waxay dadkani kusoo kordhiyeen deegaanadaas beera falashada, sida Mudulaha loo dhiso iyo farsamada qalabka lagu dagaal galo. Jareerta iyo Biya Maalka la degaa waxaa ka dhexeeya is ixtiraam iyo is xurmeyn. Ma dhici karto in qof Jareer ah lagu xad gudbo waayo waxay leeyihiin xeer ka dhexeeya oo labadaba qabanaya. Is guursiga waxay kala mid yihiin Soomaalida kale laakiin haddii nin jareer ahi ay gabadh Jileec ahi jeclaato aabaheed kama daba tegi karo oo xeerka ayaa qabanaya. Waa sidoo kale haddii wiil Jareer ahina uu raaco gabadh Jileec ah. Haddii reero kale oo Jileec ah ay Jareertu doonayso inay ka guursato BiyaMaalku hiil iyo hooba wuxuu la garab taagan yahay sidii qofkaasi uu ku guursan lahaa, halka ay Soomaalida kale dagaal iyo aflagaado kala soo hor jeesanayaan. Caayda iyo af xumadu waa reeban tahay ileyn waxaa qabanaya sharciga u degan labada qowmiyadood. Booskii Suldaanka Biyamaal waxaa fadhiya nin ka soo jeeda qowmiyada Jareerta ah oo taladiisa iyo warkiisa loo hogaansanyahay.
ABAALKA MADHIBAANKU KU LEEYAHAY SOOMAALIDA
Halkaa waxaa ka cad in dadkani ay Soomaalida inteeda kale ka horumarsan yihiin marka laga hadlayo Midab takoorka. Waxaa xusid mudan in ay sida Midgaanka ama Madhibaanka ay ka qayb qaateen xornimo gaarsiintii Koonfurta Soomaaliya iyada oo uu hogaaminayo Abaanduulihii caanka ahaa ee NASIIB BUUNDO ee Gumeystihii talyaaniga la dagaalamayey mudada badan. Waxaa kaloo qowmiyadan ka dhashay mujaahidiintii inta ay badda quusaan doonyaha Talyaaniga ee badda taagan xargaha ka soo jari jirey si ay u quusaan, waxaana loo yaqaanaa REER XARIN GOOS. Dhamaan iyadoon loo kala harin qowmiyadaha ku nool deeganadaas waa kuwii ku wiiqay gumeystaha lafihiisana waray LAFOOLE in kastoo maanta lafo kale oo xaqdara ah laga dabageeyey!
Waxaa jira deegaanadaa Jareerta ka sokow Jileec la yaso oo loo yaqaan HEBELOW waxaan filayaa in magac loogu yeedhaba lagaran waayey maadaama ay Soomaalida kale ay horey uga laasatay!
Dadkan loo yaqaano Hebelow waxa ay ka soo jeedaan qabiil ahaan ABDHAARE oo ah Cawra Male Curadkiisa, waxaana la dhashay carruur fara fadan. Akhristow waxa la yaab leh in Abdhaare uusan nasab ahayn laakiin walaaladii ay yihiin nasab aan sina loo takoori karin! Waxaan filayaa Abdhaare waa la takooray fal xun uu sameeyey awgii!
Tusaalaha ugu fiican ee dadka Soomaaliyeed ay ku daawoobi karaan waa takoorkii la takooray beel ka mid ah AJUURAAN oo loo yaqaano GEEL BARIIS. Geel bariis, sidaad magaca ka fahmasaan wuxuusan ka kicin hashii bakhtiga ahayd, halka uu walaalkii inta uu cunay uu ka guureeyey.
Waxaa Ajuuraan go�aan ku gaaray in la takooro (tag seer) oo aan laga guursan 9 FAC. Laakiin hadda waa la guursadaa oo nasab buu noqday waayo wakhtigii loo qabtay ayaa dhamaaday! Bakhtigii uu cunay wuu ka dhaqmay!!!
HADDABA GOORMUU AJIGU FAHMAYAA DULMIGIISA!!!!!!!!!!!!
INTEE FAC BAY AJIGA AWOOWAYAASHOOD QABSADEEN!!!!
Waxaa ka qayb qaatay warbixintan Sh. C/Kariin
eediran@yahoo.com C/Rahman A,Kaneec(C/Rahman Eelay)
Waa Yaabe Xaguu ka Yimid Magaca YIBIR! [Eelay]